Izindaba - 2020 Wenzhou Golden Eagle Pump valve Exhibition / International Exhibition valve Exhibition / Hlangana nawe e-Oubei yongjia ngo-Okthoba 23
Umbukiso we-15 Wenzhou (Golden Eagle) Pump valve Exhibition / Valve Exhibition / pump valve Exhibition / Exhibition pump International Exhibition / pump company / valve product product / uzobanjelwa eWenzhou Yongjia Oubei Culture and Sports Square kusuka ngo-Okthoba 23-25, 2020!
Umbukiso we-15 Wenzhou (Golden Eagle) Pump valve Exhibition usuthuthukisiwe ngokwesilinganiso, ikhwalithi kanye nezinsiza ezisuselwa kokunye, kunamadokodo angama-650 nendawo yombukiso elinganiselwa kumamitha-skwele angama-20 000. Qhubeka nokuqinisa izethameli eziqeqeshiwe zasekhaya futhi i-Germany, i-Italy, iKorea, iSingapore, i-India, iVietnam kanye nabanye abathengi bangaphandle bahlela abamenyiwe, futhi inhlangano yabasebenzisi bezimboni zokugcina izomenyelwa embukisweni ophelele we-pump valve, amapayipi okufaka, njengobuchwepheshe bamuva nemikhiqizo, umkhakha wemboni yephampu ye-valve ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe bamuva nezixazululo.
I-PVPEW 15th Wenzhou (Golden Eagle) Impompo ye-valve Exhibition ingumbukiso wasekhaya wephampu we-valve valve, sekuwumcimbi wobungcweti ochwepheshe ekhaya nakwamanye amazwe abangaluphuthelwa.
Kusukela wenzhou Jinying Media Co., LTD. Waba nombukiso wamaphampu we-valve oqeqeshiwe ngo-2004, ithonya lawo belilokhu likhula futhi nezinga lalo belikhula, futhi selibe ngomunye wemicimbi ebaluleke kakhulu embonini. Umbukiso ukhombisa ngokuqina amandla wemboni nephayiphu yaseChina, ikakhulukazi “idolobha lasekhaya lempompo ne-valve yaseChina”; Ngaphezu kwalokho ngcono ukubonakala nethonya Wenzhou futha futhi umkhakha valve ekhaya aphesheya; Yethula amathalente akwamanye amazwe athuthukile, ubuchwepheshe, ukuphathwa kanye nezimali zokuthuthukisa nokuguqula izimboni zendabuko, ukugqugquzela ukwenziwa ngcono kanye nokwenziwa ngcono kohlaka lwezimboni, nokuqhubekisela phambili ukuncintisana kwamabhizinisi; Ukwanda okwengeziwe kwe-wenzhou pump valve industry yokuthengisa kwamanye amazwe ukuthengisa, ukwandisa imali engenayo yokushintshaniswa kwamanye amazwe; Kubaluleke kakhulu ngokomlando nangokwenzekayo ukuqhubekisela phambili ukukhuthaza ukuqhubeka okuqhubekayo, okusheshayo nokunempilo kweYongjia, Wenzhou kanye nephampu nemboni yeChina.
Ngemuva kweminyaka yentuthuko, i-Wenzhou futha nemboni ye-valve manje inamabhizinisi angaphezu kwama-3,110, kufaka phakathi amabhizinisi angama-523 anenani lonyaka lokukhipha elingaphezu kwezigidi ezingama-20 zama-yuan. Kukhona amabhizinisi obuchwepheshe obuphezulu angama-77 ezinhlobo ezahlukahlukene. Izindawo zokuhlanganiswa kwezimboni ikakhulukazi zise-Oubei, eLongwan naseRuian. Ngo-2019, inani eliphelele lokukhishwa kwezimboni kulo lonke umkhakha lifinyelele kuma-yuan angaphezu kwezigidigidi ezingama-45, ngokukhula konyaka nonyaka ngama-9%.